That's so good, right?: ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ အေ့စ်ရောဂါနှင့် ကာမတဏှာ (၃)
စင်ကာပူအလုပ်လာလုပ်သူ နိုင်ငံခြားသားအားလုံး HIV စစ်မယ်။ ရောဂါရှိရင် အလုပ်လုပ်ခွင့်မပေးဘူး . ဆိုတဲ့ ဥပဒေကြီးထွက်လာတယ်။ ကိုယ် အလွန်ကြောက်တဲ့ HIV စစ်ဆေးမှုကို မလုပ်ချင်လဲ၊ လုပ်ရတော့မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ခွင့်ပါမစ် ၆လလောက်ကျန်သေးတော့၊ နောက်ဆုံး Orchard Road က နိုင်ငံခြားသားများကို အထူးကုပေးတဲ့ ဆေးခန်းတခုမှာ တိတ်တိတ်ကလေး HIV သွားစစ်ရတယ်။ ဆရာဝန်ကိုတော့ အမှန်အတိုင်းပြောရတယ်။ ငါ ..ဒီလို တဏှာကိစ္စ ပိုက်ဆံပေးပြီးလွန်ကျူးမိတယ်။ HIV ရှိမရှိ သေချာအောင် သိချင်လို့ ကိုယ့်ဖာသာ လာစစ်ပါတယ် ပြောရတယ်။ ရင်ဖွင့်ရတယ်။
ဆရာဝန်က လူနာတွေအကြောင်းကို နှုတ်လုံမှန်း၊ ယုံကြည်ပြီးသား၊ ပြီးတော့ အစိုးရဆေးခန်းထက် အဆများစွာဈေးကြီးပေးပြီး စစ်ရတယ်။ တပတ်အကြာမှာ ဘုရားဆုတောင်းပြီး၊ Result သွားယူတော့ HIV မရှိပါ ..သိရတယ်။ နောက်တကြိမ် သေချာအောာင် တခြား Lap မှာ စစ်ကြည့်တော့လည်း အိုကေပါတယ်။ အဲဒီ ၂နှစ်လောက်ကာလဟာ Nightmare ပါပဲ။ မဟုတ်တာလုပ်နေကျလူက မစိုးရိမ်ပေမဲ့ မလုပ်ဖူးတဲ့လူ တခါခိုး၊ တခါမိ ဖြစ်သွားတတ်လို့ ... ကိုယ်တွေ့ စိုးရိမ်မှုကြီးတခုပါပဲ။
ကျွန်တော်ကတော့ နိုင်ငံခြားရောက်လာတယ်။ မြန်မာပြည်က ငယ်စဉ်က မူရစ်ဆေးဝါးသမား၊ အပျော်ပါးသောက်စားသူများ .. အသက်၄၀မပြည့်ခင်၊ သေဆုံးသွားကြပါပြီ။ ကျွန်တော့ညီအရင်း AIDS နောက်ဆုံးအဆင့်မှာ မိဘထံပြန်ပြီး၊ ချေး၊သေး အိပ်ယာပေါ်မှာပဲ စွန့်ရတဲ့အထိ ပက်လက်၊ နှစ်ချီခံစားပြီး သေဆုံးသွားပါတယ်။ ကျွန်တော်မိဘများက စောင့်ရှောင့်နိုင် အပယ်ခံဘ၀မှာ ဖြေသာပါသေးတယ်။ တခြားသူငယ်ချင်းတဦး AIDS နဲ့လဲနေချိန် ..သူ့အခန်းကိုဝင်တွေ့တဲ့အခါ ချေးသေးနံစော်ပြီး၊ သေဖို့စောင့်နေသူကို ၀မ်းနည်းဖွယ်တွေ့ရတယ်။ ဒါက AIDS အမျိုးသားများဘ၀ပါ။
အမျိုးသမီးများဘ၀ကတော့ ပိုဆိုးဝါးလှပါတယ်။ အသက်၂၀အရွယ် အိမ်ကထွက်ပြီး အပြင်မှာဘ၀ရှင်သန်၊ မဟုတ်တာတွေဖြစ်ပျက်ပြီး ..အသက်၃၀လောက်မှာပဲ မိဘရပ်ရွာကို ပြန်ပြီး၊ သေဆုံးကြပါတယ်။ တချို့လည်း အိမ်မပြန်တော့ပဲ .. ရောက်တဲ့နေရာမှာ မိဘဆွေမျိုးများနဲ့အဆက်ဖြက်၊ သေဆုံးကြပါတယ်။ အလွန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့ ဒီရောဂါကြီးဟာ ကာမတဏှာကြောင့် ပေါ်လာရတယ် ဆိုရင် မမှားပါဘူး။
စင်္ကာပူရောက် မြန်မာများ - ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာ အေ့စ်ရောဂါနှင့် ကာမတဏှာ (၃)